၂၀၂၁ ထဲမှာ စောင့်ကြည့်ရမဲ့ Haung Zitao ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲသစ် | News Bar Myanmar
၂၀၂၁ ထဲမှာ စောင့်ကြည့်ရမဲ့ Haung Zitao ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်
Tao ကို အဆိုတော်တစ်ယောက်အပြင် သရုပ်ဆောင်မင်သားတစ်ယောက်အဖြစ်ပါ မြင်တွေ့ချင်နေကြသူတွေအတွက် ပန်ဒါရဲ့ ဇာတ်လမ်းသစ်တစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ ၂၀၂၁ ထဲမှာ ထွက်လာဖို့မျှော်လင့်နေရပြီး ဇာတ်လမ်းလေးနာမည်ကတော့ “New Vanity Fair” လို့ အမည်ရပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ Tao ဟာ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်မင်သားကြီး Wu Gang နဲ့အပြင် မင်းသမီးလေးကလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Sun Yi ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကဇာတ်ဆောင်တွေကတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားသူတွေဖြစ်ကြပြီး ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်လေးကလည်း ကောင်းမွန်နေပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဥ်းကတော့… Ding Kemang (Wu Gang) ကတော့ အရည်အချင်းရှိတာကြောင့် နာမည်ကောင်းရနေတဲ့ ပြဇာတ်မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သလို Song Yang (Tao) ရဲ့ ဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Song Yang ကတော့ မိန်းကလေးတွေအသည်းစွဲ နာမည်ကြီးတစ်ယောက်ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ပြဇာတ်အဖွဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ လက်မှတ်တွေအကုန်လုံး ရောင်းကုန်ဖို့အတွက် Song Yang နဲ့ Ding Kemang ကို “Father & Son” ဆိုတဲ့ပြဇာတ်မှာ အတူသရုပ်ဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ကြီးနေတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ပညာရှိတဲ့ဆရာကြားမှာ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမလဲ?
Song Yang ကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပါ့မလား? Song Yang ကကော အနုပညာအပေါ်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ခံယူချက်ဟာ ပြောင်းလဲသွားမလား? ပြဇာတ်ကနေတစ်ဆင့် အနာဂတ်ခရီးလမ်းမှာ ဘယ်လိုတွေ တဆစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားမှာလဲ? စသဖြင့် လူငယ်တွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်စေနိုင်မဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကြီးပြီး ခပ်ချေချေပုံစံနဲ့ ဇာတ်ကောင်ဟာ Tao အတွက် ခက်ခဲမဲ့ဇာတ်ရုပ်မဟုတ်သလို အနုပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်တာကြောင့် ဒီကားထဲမှာကော Tao တစ်ယောက် ဘယ်လိုလက်စွမ်ပြဦးမလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
သမားရိုးကျအချစ်ဇာတ်လမ်းပုံစံတွေလိုမဟုတ်ဘဲ လူငယ်တွေရဲ့သဘာဝကို အနီးစပ်ဆုံးရိုက်ကူးပြသထားတာကြောင့် ကြည့်မိတဲ့သူတွေအတွက် ပညာရမဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Tao လေးကိုမှ အားပေးချင်ရင်တော့ ထွက်လာတဲ့အခါ အားပါးတရ ကြည့်လိုက်ကြပါတော့နော်။
Next နာမည်ကြီးလာမှုရဲ့ ကောင်းကွက်၊ ဆိုးကွက်တွေကို ပြောပြခဲ့ဖူးတဲ့ Wang Yibo »
Previous « “How You Like That” မှာ BLACKPINK ကို Hanbok ဝတ်ဖို့ အကြံဉာဏ်ပေးခဲ့သူက...